Android DVD Players si uu u daawado DVD Movies on Android
DVD Creator U qalab kala duwan
1. Guba Android Video inay DVD
2. Beddelaan fiidiyo Video inay DVD
3. U beddelaan Handycam Video inay DVD
5. Beddelaan 8mm in DVD
6. Guba Canon Video inay DVD
8. iPlayer in DVD
9. Beddelaan Vuze Video inay DVD
10. Panasonic DVD gubi
11. Guba Nikon Video inay DVD
12. Madaxweyne Siilaanyo Oo DVD Player
13. Guba Sony Bloggie in DVD
14. Guba Kodak Video inay DVD
> Resource > Android > Sida loo Daawo DVD Movies on Android
Sida aynu wada ognahay, telefoonada Android aadan lahayn baabuur DVD u ciyaaro DVD filimada ka. Taas macnaheedu waxaa jira, waxan oo kale, taasoo keeneysa in aad si toos ah u ciyaaro DVD disc on Android phone waqtiga la joogo. Sidaas waxa haddii aad rabto inuu u ciyaaro DVD ee Android? Halkan waxaa ku qoran laba xal aad u:
Xalka 1: Download a Android DVD Xoog Player
Xalka 2: Beddelaan DVD in ay Android-friendly Video qaabab
Si aad u ciyaaro DVD ee Android phone, waxaad ka heli kartaa ciyaaryahan awood leh Android DVD inuu u ciyaaro DVD files in labada DVD folder, VOB ama qaabab kale. Dhab ahaantii, ku Wondershare Player u Android waa ciyaaryahan Android. Maxaa ka mid ah wax play kale Android ka dhigaysa in ay si dhab ah u fiican yahay in, waxa karo si toos ah u ciyaaro galka Video_TS ka card SD la DVD menu navigation iyo subtitles! Waxay u egtahay mid yaab leh? Just raac tallaabooyinka fudud ee hoose si aad u aragto sida loo sameeyo!
Talaabada 1: iibsiga oo dhan DVD Folder in aad telefoon.
Tallaabada 2 : U tag ah Local tab barnaamijka, ka heli file bartilmaameedka iyo dhoolacadeynta!
Talo : Haddii app uusan ka heli DVD folder aad kaadhka ah SD dibadda, waxaad tagi kartaa Settings > Scan Warbaahinta File Folder > Media Folder > dar Folder iyo dooran folder caga (ie / kaydinta / extSdCard / Videos) ah. Markaas warbaahinta aad waxaa laga heli doonaa hoos Local tab 's.
Haddii aad computer iyo Android phone waa in network degaankaaga isla, Wondershare Player ee Android sidoo kale si toos ah u ciyaari karo files DVD wadaagaan your computer ah! Sidaas, waxaad badbaadin kartaa oo keliya ma aha markii gaadiidka files DVD in kaarka SD ku xira computer, laakiin sidoo kale badbaadiyo kaydinta card SD, sida faylasha had iyo jeer waa la yara waaweyn. Habkaani waa in ay ahaadaan fikrad cusub oo ku saabsan ciyaaryahanka, si, halkan waxaad dhici doono wax yar.
Talaabada 1: Geli disc DVD ah si aad u computer ugu horeysay oo ay helaan folder VIDEO_TS ah, kadibna waxaa shareable. Fiiri cinwaanka IP in la ogaado meesha aad files warbaahinta ku yaalaan.
Talaabada 2: Hadda xidhmaan your computer fog, u tag ah Share tab barnaamijka ka dibna riix icon ku yaal dhinaca midig sare ee Player.
Tallaabo 3: Ka dibna ku dar server fog, aad sameyn karto oo doorataa "+" ee xaq u top, iyo galaan "Cinwaanka Server", "User Name" iyo "Password" Markaas riix. OK si ay u dejiyaan server cusub.
Tallaabada 4: Ka dib markii ay ku daray server ah, furo gal in, ka heli filimada DVD iyo dhoolacadeynta!
Haddii aadan rabin in la beddelo media player default telefoonka aad Android, halkan waa xal kale; si loogu badalo DVD movie in Android socon video hore; si aad u ciyaari karo ciyaaryahan kasta warbaahinta kala duwan. Si lagaaga caawiyo in aad si fudud taas loo gaaro, ku Video Wondershare Converter si weyn lagu talinayaa. Waxay awood u aad si loogu badalo DVD files si Radidiyaha taleefan kasta Android la qasabno yar. Download software this oo raac talaabooyinka si aad u tijaabiso hadda!
Talaabada 1: shuban DVDs adigoo riixaya DVD Load button.
Talaabada 2: Riix image qaab ku Qaabka Output guddi oo taga si ay Device tab. Halkan waxa aad ka heli kartaa dhammaan daydo phone Android sida Samsung, HTC, Nexus iyo wax ka badan ka mid ah liiska. Dooro mid ka mid ah sida ay baahidaada.
Talaabada 3: Markaas ka dhacay Beddelaan on geeska hoose ee midigta ah interface ay u bilaabaan hawlaha qaab beddelidda. Dhowr ilbiriqsi ka dib, waxaad heli doontaa DVD faylasha badaley.
Talaabada 4: Saxiixa files si ay telefoonka aad Android oo iyaga la ciyaaro ciyaaryahan kasta. Waa in si fudud!
Halkan ka video tutorial faahfaahsan:
Top Music Downloaders Bilaashka ah ee Samsung Phones